सैनामैनामा हुने औद्योगिक व्यापार महोत्सवमा नगरस्तरीय मम्मी डान्स प्रतियोगिता हुने
टक्कर न्युजबुटवल, कात्तिक ११ / सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको आयोजनामा मुर्गियामा हुने दोस्रो राष्ट्रिय सैनामैना, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार महोत्सव २०७४ को अवसरमा मम्मी डान्स प्रतियोगिता हुने भएको छ । सैनामैना नगरस्तरीय मम्मी डान्स प्रतियोगितामा बच्चा भएका विवाहित मम्मीहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने मेला आयोजक तथा संघका सचिव टिकावहादुर शाहीले वताउनु भयो । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई आकर्षक पुरस्काको व्यवस्था गरिएको सचिव शाहीले वताउनु भयो । यसैवीच महोत्सवको तयारीकै क्रममा शनिवार सैनामैनाका जनप्रतिनिधिहरुले महोत्सवलाई कुनैपनि अवस्थामा सफल वनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन । जनप्रतिनिधिहरुले महोत्सवले समग्र सैनामैना नगर क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै आफूहरुले महोत्सव सफल वनाउन अपनाउनु पर्ने कुनै कुरामा द्विविधा नराख्न महोत्सव आयोजकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सैनामैना नगरपालिका वार्ड नं. १ का अध्यक्ष केयरसिंह गलामी, २ का अध्यक्ष कामदेव भुसाल, ३ का अध्यक्ष रत्नवहादुर पौडेल र वार्ड नं. ४ का अध्यक्ष धनवहादुर कार्कीले सैनामैना नगर क्षेत्रमा आयोजना हुने मेला र महोत्सव सैनामैनाकै गहना भएको र त्यसवाट समग्र सैनामैना क्षेत्रकै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै सहयोगमा कुनैपनि कञ्जुस्याई नहुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा आयोजक समितिका संयोजक राजवहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन उद्योग उपाध्यक्ष रिमवहादुर श्रेष्ठ र संचालन महासचिव रामप्रसाद अधिकारीले गर्नुभएको थियो । यसैगरी शनिवार नै सैनामैना नगर क्षेत्रमा रहेका आमा
सेयर बजारमा के “सिजन”, के “अफसिजन” ! अब यसो गरे कसो होला ? रोहन शर्माको व्लग
सेयर बजारमा श्रावण/भाद्र महिनालाई सिजनको रुपमा लिने गरिन्छ भने फाल्गुण देखी जेष्ठको समयलाई अफ सिजनको रुपमा लिईन्छ । सिजन यस अर्थमा कि यो बेला कम्पनीले बर्षभरिको प्रगती बिवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै सेयर होल्डरलाई प्रतिफल प्रदान गर्दछन् । अफ सिजन भनिएको समयमा चाहिं कम्पनीहरु लाभाँश बाँडिसकेर थारो अवस्थामा रहेका हुन्छन्। बजारको यो पुरानो प्रबृत्ती धेरै पटक दोहोरिएको भएता पनि पछिल्लो समयमा भने यो उल्टिंदै गएको पाईन्छ । सबैले फाल्गुन चैत्रमा किन्ने अनि श्रावण भाद्रमा बेच्ने भए श्रावण भाद्रमा किन्ने चाहिं कसले ? भन्ने बेलामा चाहिं फाल्गुण चैत्रमा रोपेको खेती श्रावण भाद्रमा भित्र्याउने भनिन्छ। आम लगानिकर्ताको मनोबिज्ञान यही सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको पाईन्छ । फलत मास साईकोलोजी एकैतिर दौंडदा बजारले उल्टो दिशा समात्ने गर्दछ । दुई बर्ष अगाडी देखिएको बजारको उल्टो चक्र यो पाली पनि दोहोरियो । अफ सिजन मानिने समयमा मज्जाले बढेको बजार अहिले सिजन भनिएको समयमा चाहिं सुस्तायो । कम्पनीले उत्साहजनक बित्तिय बिवरण पस्कँदा पस्कँदै, अपेक्षा गरे अनुरुप लाभाँश घोषणा गर्दा गर्दै पनि बजार अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेन्, बरु उल्टै घट्यो। आज भन्दा दश बर्ष अगाडी सान्दर्भिक मानिएको प्रबृत्ती अहिले आएर मेल खानै पर्छ भन्ने छैन, बजारको पुँजिकरण , बजारको बिस्तार, सुचिकृत कम्पनीहरुमा बृद्धि, बजारमा म्युचुअल फण्ड लगायत ठुला लगानिकर्ता हरुको उपस्थिती , लगानिकर्ताको सहज पहुँच, प्रबिधिमा भएको प्रगती, सेयर बजार
सेयरबाट करोडपति बन्न सकिन्छ ! रवीन्द्र भट्टराईसँगको अन्तरवार्ता ।
सेयर बजार विश्लेषक हुन्, रवीन्द्र भट्टराई । उनका स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित सेयरबाट करोडपति, नेपालको सेयर बजार आदि पुस्तक प्रकाशित छन् । सेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एन्ड सर्भिसेज (एसआरसिएस) मार्फत सेयरसम्बन्धी तालिममा सक्रिय रवीन्द्र भट्टराई नेपाली सेयर बजारलाई लामो समयदेखि नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । भट्टराईसँग नेपाली सेयर बजार, यसका सम्भावना, सेयर बजारमा लगानी गर्ने तरिका, छोटो समयमै कसरी सेयरबाट धनी बन्न सकिन्छ जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर साप्ताहिकका लागि मुकुन्द बोगटी र जनक तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी : घरमै बसी–बसी करोडपति बन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिन्छ भने त्यसको उपाय के होला ? पैसा र सम्पत्तिको चाहना हुने जो–कोहीका लागि प्रिय शब्द हो—करोडपति । करोडपति बन्ने चाहना प्राय: सबैमा हुन्छ, तर कसरी ? तपार्इं–हामीसँग पैसा कमाउने दुईवटा विकल्प छन् । पैसाका लागि काम गर्ने वा पैसालाई काममा लगाउने । पैसाका लागि काम गरेर करोडपति बन्न गाह्रो छ तर पैसालाई काममा लगाउन सकियो भने करोडपति बन्ने सपना चाँडै पूरा हुन सक्छ । पैसाका लागि काम गर्नु भनेको जागिर खानु हो । जहाँ काम गरे पैसा आउँछ, काम नगरे पैसा आउँदैन तर काम नगरे पनि पैसा आइरहनु भनेको पैसालाई काम लगाउनु हो । जस्तो तपाईंले राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभयो भने काम नगरे पनि हरेक वर्ष कम्पनीले लाभांश दिइरहेको हुन्छ, जुन पैसाले काम गरेर ल्याएको
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको ६४ औं साधारण सभा तथा २३ अधिवेसन बुधबारबाट शुरु
बुटवल, २५ असोज । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको ६४ औं साधारण सभा तथा २३ अधिवेसन बुधबारबाट शुरु भएको छ । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले उद्योगि ब्यवसायीका समस्या धेरै भएकाले समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय ब्यवसायीक सुरक्षा चुनौतीको विषय समस्याका रुपमा देखिएको भन्दै ब्यवसायीक सुरक्षा चुनौतीले ब्यवसायीहरु पलाय हुने अवस्था धेरै रहेको बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिराज सुवेदीले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, जितगढी किल्लाको संरक्षण सहित बुटवलको बिकासका लागि उपमहानगरपालिका उद्योग वाणिज्य संघ संग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा औद्योगिक तथा ब्यवसायीक क्षेत्रमा कमल चलाएको भन्दै रुपन्देहीका विभिन्न संचारमाध्यममा कार्यरत ६ जना पत्रकारहरुलाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा संघले पत्रकार विष्णु घिमिरे, टोपराज शर्मा, हरिष ढकाल, विश्वास ढकाल, भूवन कार्की, र अमृता अनमोललाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै सोही अवसरमा उद्योग तर्फ तेजेन्द्र खडका, युवा उद्यमी तर्फ परमेश्वर क्षेत्री, बाणिज्य तर्फ गोपाल बहादुर पोख्रेल, महिला तर्फ भारती जोशी, कृषि तर्फ गंगाप्रसाद सापकोटा र पर्यटन तफबार्ट प्रबिण पाठकलाई सम्मान गरीएको थियो । संघका बरिष्ट उपाध्यक्ष खिमबहादुर हमाललको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको संचालन महासचिव हरि अर्यालले गर्नु भएको थियो । यसैबीच तीन दिनसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन
चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउ युरोपबाट उत्पादन सुरू, सर्वियाका राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने !
चौधरी ग्रुपले युरोपमा पनि वाइवाइ चाउचाउ उत्पादन सुरू गरेको छ। युरोपियन मुलुक सर्वियामा निर्मित वाइवाइको प्लान्टबाट यसअघि नै उत्पादन सुरू भइसकेपनि आजबाट औपचारिकरुपमा उद्घाटन हुने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले जानकारी दिएका छन्। चौधरीले आफ्नो ट्वीटरमार्फत् बिहीबार औपचारिकरुपमा ‘वाइवाइ युरोप’ सुरू हुने र सर्वियाका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर भुचिचले यसको उद्घाटन गर्ने बताएका हुन्। नेपालको पहिलो ब्रान्डको रुपमा वाइवाइ युरोपेली राष्ट्रबाट पनि उत्पादन भएको हो। ‘सिजी फुड्स युरोप’ नामबाट सर्वियाको रुमा सहरमा रहेको वाइवाइ प्लान्टबाट व्यवसायिकरुपमा यसको उत्पादन हुन्छ। हाल विश्वभर वर्षमा २ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बिक्री भइरहेको वाइवाइले विश्व तयारी चाउचाउ बजारको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा ६ र भारतमा आठ प्लान्टमार्फत उत्पादन भइरहेको वाइवाइले भारतीय तयारी चाउचाउ बजारमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। चौधरी ग्रुप बंगलादेश, केन्या र साउदी अरेवियामा पनि वाइवाइका प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारीमा छ । नेपालका एकमात्र ‘फोर्ब्स’ सूचीकृत अर्बपति विनोद चौधरीले विसं २०४१ सालमा थाइल्यान्डबाट वाइवाइ भित्र्याएका हुन्। त्यतिबेलै उनले यसको अन्तराष्ट्रिय ब्रान्ड अधिकार पनि आफूसँगै ल्याएका थिए। यो तीन दशक अवधिमा ललितपुरको भैंसेपाटीबाट सुरु भएको वाइवाइ नवलपरासीको उद्योग ग्राम हुँदै बर्दियासम्म फैलिएको छ। अब पूर्वी क्षेत्रका लागि इटहरीमा छुट्टै प्लान्ट बनाउने उनको तयारी छ। त्यस्तै भारतमा सिक्किम (रम्पो) बाट सुरु भएको वाइवाइ उत्पादन उत्तराखण्ड (रुद्रपुर), आसाम (गुवाहाटी र सिल्चर), बिहार (पूर्णिया) हुँदै आन्द्राप्रदेश (चित्तुर)
काठमाडौं / करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामि क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताब लगेर खड्कालाई कारबाही गर्ने तयारी आपूर्ति मन्त्री शिबकुमार मण्डलले गरेका छन्। निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा कैफियत भएको ठहरसहित कारबाहीको लागि सिफारिस गरेपछि आपूर्ति मन्त्री मण्डल कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ,’ मण्डलले भने, ‘क्याविनेट बसेपछि ठोस रुपमा निर्णय आउँछ । ’ मन्त्री मण्डलले घुमाउरो पाराले अब बस्ने क्याविनेट बैठकबाट हटाउने संकेत गरेका हुन्। उनले निगम नेतृतवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्कालिन आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले असहयोग गरेको बताए। ‘सविचलाई परिवर्तन गरेको रियल हो,’ मण्डलले भने, ‘लुकाउनु पर्ने छैन ।’ ‘दोषी सबैलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘निदोर्षलाई दुख दिँदैनौं ।’ ‘एक रुपैयाँ चोरे पनि चोर हो दुई सय रुपैयाँ चोरे पनि चोरै हो,’ उनले भने । खड्काले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अनियमिता गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सोमबारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चार गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदन पारित गरिसेकेको छ । सो समितिको
रुरु मिलन केन्द्र रुपन्देहीले बाढीप्रभाबितका लागि राहत प्रदान
बुटवल / रुरु मिलन केन्द्र रुपन्देहीले बाढीप्रभाबितका लागि राहत प्रदान गरेको छ । बुटवल उपमहानगरको प्रकोप ब्यबस्थापन कोषमा २५ हजार ५ सय ५५ रुपैंया हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त रकम बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख गोमा आचार्यलाइ केन्द्रका अध्यक्ष राधा ज्ञवालीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । गुल्मीको रुरु गाउपालिकामा जन्म तथा कर्म भइ हाल रुपन्देहीमा बसोबास तथा कर्मगर्नेहरुको बिचमा आपसी भाइचारा,सम्बन्ध स्थापित तथा सामाजिक सेवा गर्ने उद्धेश्य सहित भदौ १ गते स्थापना भएको रुरु मिलन केन्द्रले तीजमा दरखाने कार्यक्रममा संकलित रकमलाइ बाढि प्रकोप पिडितका नाममा नगरमा स्थापित प्रकोप ब्यबस्थापन केन्द्रलाइ हस्तान्तरण गरेको हो । केन्द्रकी अध्यक्ष राधा ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गोमा आर्चायले कोषमा संकलित रकमलाइ बास्तबिक पिडितसमक्ष पुर्याउने बताइउनुभयो । कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योगकी महिला संयोजक मन्जु भुसाल ,केन्द्रकी उपाध्यक्ष शान्ता बराल,कोषाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक अनुपमा श्रेष्ठ,सचिब जमुना सुबेदी ,प्रेस सल्लाहकार कपिल ज्ञवाली,कर्तब्य नेपालका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल,बिहानी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष सोभाखर पोखरेल,कृष्ण कदम नेपालकी इन्दिरा आचार्य,रेडियो मुक्तीका स्टेशन म्यानेजर कल्पना तिवारी लगायतले बोलेका थिए ।
कम्पनिहरुले उत्साहजनक बित्तिय बिवरणका साथ उत्कृष्ट लाभाँश प्रदान गर्दा पनि बजार किन अलमलमा ? (रोहन शर्माको ब्लग)
राेहन शर्मा मात्र “The show must go on” भनेझैं चलिरहेको छ यहाँको सेयर बजार ! खै जिम्मेवारीपन ? मिडियाहरु जानेर वा नजानेर TRP बढाउन, पहिलो हुन र फरक प्रस्तुती दिन मनगढन्ते कुरा , गलत समाचारको सहारा लिन्छन्। केहिदिन अगाडीको कुरा हो एकाबिहानै एउटा अनलाईन मिडियाले लेख्यो “यस कारण आज सेयर कारोबार नहुने” लिन्क भित्र गएर हेर्दा लेखिएको थियो “आज निजामती दिवस , देशभरका निजामती कर्मचारीको बिदाको कारण सेयर कारोबार पनि बन्द हुनेछ!” उक्त पोर्टललाई निजामतीको अर्थनै थाहा रहेन छ। सामाजिक सँजालमा धेरैले गाली गरे। त्यस्तै एउटा पोर्टलले साधारण सभालाई ” आज NIC ASIA को बार्षिक उत्सब” भनेर लेखिदियो ! बजारमा खुलेआम ईन्साईडर ट्रेडिङ हुँदा नियामक मुकदर्शक बनेर बस्छ । लगानिकर्ता टुलुटुलु हेरेर बस्नुको बिकल्प छैन। गत हप्ता ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको गलत सुचना प्रवाहलाई लिएर के कारवाही भयो? कारवाही भयो या भएन केहि सुनिएन। लगानिकर्ताको हक र हितको लागी भनेर खुलेका ईन्भेष्टर फोरमहरु जब बजार घट्छ अनि मात्र दुलो बाट निस्केर बिज्ञप्ती छाप्छन्। लाग्छ बजार बढाउनु मात्रै उनिहरुको अन्तिम उदेश्य हो र यस बाहेक उनिहरुको कुनै जिम्मेवारी छैन। बजारको निरन्तर गिरावटपछी हिजो ईन्भेष्टर फोरमले प्रकाशित गरेको बिज्ञाप्ती यसैको उदाहरण हो। सँयोगबस झिनो अँकले बजार सकारात्मक हुँदा बजार बढ्नुको श्रेय उक्त बिज्ञप्तीलाईनै दिए कतिपय मिडियाहरुले। प्राय लगानिकर्ता आफुले सेयर बेचिसकेपछी अब बजार घट्छ
दशैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, गाडी भाडा बढेकाे छैन । सेयर गरेर सबै सामु पुर्याउनु हाेला ।
काठमाडौं / भोलि मंगलबारदेखि दशैंको लागि सार्वजनिक सवारी साधानको अग्रीम टिकट बुकिङ खुला हुँदैछ । दशैंमा राजधानीबाट आफ्नो घर फर्किनेहरुले बसको टिकट काट्न ब्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैले टिकट खुल्नासाथ काठमाडौंका कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, पुरानो बसपार्क, सुन्धारा लगायतका स्थानमा रहेका बस काउन्टरहरुमा ठूलो भीड लाग्ने निश्चित नै छ । एकै समयमा धेरै यात्रुले काठमाडौं छाड्ने भएकाले यो समयमा पहिले नै टिकट काट्ने प्रचलन चलिहरहेको छ । तर, अग्रिम टिकट काट्दा पनि यात्रुले बढी भाडा तिनुपर्ने समस्या निकै चर्किन्छ । तोकिएको भाडाभन्दा बढी अशुल्न धरै यातायात व्यवसायीहरु अग्रसर हुने भएकाले यात्रु आफैं पनि भाडाबारे जानकार हुनुपर्छ । नभए काउन्टर बाहिर भेटिने दलालहरुले तपाईंलाई ठग्न सक्छन् भने ब्ल्याकमा टिकट किन्ने चक्करमा लाग्दा ठूलो रकम खर्चनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले आफू जाने स्थानसम्मको भाडादरबारे पूर्व जानकारी राखेर टिकट काट्न जान यातायात व्यवस्था विभागले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । बढेको छैन भाडादार यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य घटेसँगै गत माघमा सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको थियो । तर, अहिले पनि त्यसअघिकै भाडादरमा रकम अशुल्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले भाडादरबारे यात्रुहरु पनि जानकार रहनुपर्ने विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए । ‘यात्रुले आफ्नो ठाउँ पुग्ने भाडा कति हो भनेर जानकारी राख्नुपर्छ । बढी भाडा उठाउन खोज्नेलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन’ प्रवक्ता पाण्डेले
चुनाव खर्च जुटाउन सुन तस्करी, कुन पार्टीको होला आफै अनुमान लगाउनुहोस् ।
काठमाडौं । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृहकार्यमा सक्रिय रहेका बेला राजधानीमा तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । लामो समयदेखि निर्वाचन चर्चामै समेटिएको थियो । गत पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता निर्वाचनका लागि सहमत भएसँगै मिति घोषणाको गृहकार्य सुरु भयो । यहीबीच राजधानीमा भटाभट तस्करीका सुन बरामद हुन थाल्यो । सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेकै बेला पुस १३ मा थानकोटमा ७ किलो सुन फेला प¥यो । सो सुनको अनुसन्धान सकिएकै थिएन पुस २१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन फेला पा¥यो । जसले राम्रै तरंग ल्यायो । सरकारले आयोगलाई २०७४ वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दियो । सुन बरामद हुने क्रम रोकिएन । माघ १ मा चमतीमा १५ किलो सुन बरामद भयो भने फागुन ८ मा विमानस्थलमा डेढ किलो र चैत ७ मा रसुवामा ७ किलो सुन बरामद भयो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचन तयारीकै बेला भदौ १५ मा १५ किलो र १९ मा ८८ किलो सुन फेला प¥यो । प्रहरी अधिकारीहरू तस्करी भएको सुन मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै बरामद हुने स्विकार्छन् । ९० प्रतिशत उनीहरूको पहुँचबाहिरै रहन्छ । राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन सबैभन्दा खर्चिलो